जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ सील
जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ सील जनकपुरमा पैसा छर्दैं भाग्दै गरेकी महिलामध्ये एकजनामा मात्र पोजेटिभ
काठमाडौं । पक्राउ परेका पैसा फ्याल्ने महिलामा कोरोना परीक्षण देखिएपछि जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ को आपत्तकालीन बैठक बसिरहेको छ ।
जनकपुरमा पैसा छर्दैं भाग्दै गरेकी महिला शनिवार पक्राउ परेकी हुन् । उनीहरुलाई यापीड डायगोनिष्टिक टेस्ट गराउँदा पोजेटिभ निस्केको छ । वडा नम्बर सात निवासी ती महिलाहरुलाई जाँच गर्दा पोजेटिभ देख्दा पुरै वडामा त्रास फैलिएको छ ।
त्यो अन्तर्गत जानकी टोललाई तत्काल सील गर्ने निर्णय भएको किशोर गुरुले बताए । ती महिलाहरु जानकी टोलमा बस्छिन् । भोली विहान ६ वजेदेखि जानकी टोललाई सेनिटाइजर गरि सिल गर्ने र यापीड जाँच तत्काल शुरु गर्ने निर्णय भएको सात नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष जानकी राम साहले बताए ।
आरडीटीमा पोजेटिभ देखिएकी महिलाको श्रीमानको मृत्यु भइसकेको छ भने र छोरा वैदेशिक रोजगारमा रहेका छन् । ती महिलाका छोराले पठाएको रुपैयाँ आइएमइबाट ल्याएर फर्किदा बाटोमा पैसा झरेको र आफूहरुले ती पैसा नछरेको प्रहरीमा बयान दिएकी छिन् ।
प्रहरी श्रोतका अनुसार ती महिला केही दिन पहिले मात्र भारतको मधुवनीबाट फर्केकी हुन् । ती महिलाकी छोरी मधुवनीमा बस्छिन् । छोरीलाई भेटेर उनी फर्केका हुन् ।
प्रहरी श्रोत भन्छन्, दुईजना महिलामध्ये एकजनामा मात्र पोजेटिभ देखिएको हो । (स्रोत : रातोपाटी )